အိမ်လုပ် ပဲပြုတ် | Wutyee Food House
ပဲပြုတ်ကို မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မနက်စာအဖြစ် အမြဲစားလေ့ရှိပါတယ်။
ပဲပြုတ်ကို လွမ်းတဲ့ နိုင်ငံခြား ရောက်မြန်မာတွေ အလွယ်တကူ
လုပ်စားနိုင်အောင် ထိုချက်နည်းလေးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီချက်နည်းကို
၀တ်ရည် ဟင်းချက်မိတ်ဆွေ မအိသက်ဆီက ရရှိတာပါ။ ချက်နည်းလေးကို
၁။ စားတော်ပဲ (Gargen Pea) – ၂၀၀ ဂရမ် (Martket၊ အိန္ဒိယ ကုန်စုံဆိုင်
မှတ်ချက်။ ။ စားတော်ပဲ ရှာမတွေ့ပါက Yellow bea ကို အစားထိုးဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၂။ ဆိုဒါ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၃။ ထန်းညက် – ကြီးလျှင် ၂ခဲ၊ သေးလျှင် ၄ခဲ
၁။ အရင်ဆုံး စားတော်ပဲကို ဇလုံတစ်ခုထည့်ပြီ ရေများများထည့်၍ ရေ၀အောင်
၂။ ပြီးလျှင် ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း ရေစိမ်ထားသော စားတော်ပဲများကို
အပေါက်ပါသော ဇကာဗန်းထဲ ထည့်ပြီ ရေစစ်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီနောက် အညောင့်ထွက်အောင် နောက် ၂၄နာရီခန့်ထပ်ထားပေးပါ။ ၄နာရီခြားတခါ
ရေအနည်းငယ် တောက်ပေးပါ။ အပေါ်မှ အ၀တ်သန့်လေးဖြင့် အုပ်ထားလိုက်ပါ။
၄။ အညောင့်ထွက်လာပြီဆိုလျှင် ဇလုံတစ်ခုထဲ ပဲများကို ထည့်လိုက်ပါ။
၅။ ပြီမှ ပဲထဲသို့ ဆားဆိုဒါ(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်) ထည့်မွှေပြီ မပြုတ်ခင်
၆။ ပဲကို စပြုတ်လို့ရပါပြီ။ ပဲမြုပ်ရုံ ရေကို ထည့်ပြီ မီးအနည်းငယ်ဖြင့်
ရေခမ်းအောင် အထိ (၁နာရီ ၄၅မိနစ် မှ ၂နာရီခန့်) တည်ထားပေးပါ။ တည်ထားစဉ် အဖုံးအုပ်ထားပေးပါ။
ရ။ စတည်သည်နှင့် ထန်းညက်ခဲလေးများပါ တခါထဲ ထည့်ပေးပါ။ ထန်းညက်ရည် ကြောင့် ပဲများ
၀ါရာက ညှိပြီ ချိုစိမ့်ပြီ စားလို့ ပိုကောင်းပါသည်။ (ဆားလုံးဝ
မထည့်ပါနှင့်၊ ပြုတ်ပြီမှ ထည့်ချင်ထည့်ပါ)
၈။ ပြုတ်ပြီ ၄၅မိနစ်ခန့် ကြာလျှင် ပဲပြုတ်အခွံလေးများ ကျွတ်ပြီ အပေါ်သို့ တက်လာပါ လိမ့်မည်။ ထိုအခွံလေးများ ဇွန်းဖြင့် အသာလေး ဖယ်ပေးလိုက်ပါ။
၉။ ရေခမ်းသွားလျှင် ပဲပြုတ်အိအိလေး ရရှိပါပြီ။ ထမင်းပူပူလေးနှင့် ကြိုက်နှစ်သက်သလို
share bar lar….mike tal….i normally do with yellow peas…will try this one and this way too…so cool 🙂 so clever
heee Thanks hmone gyi yay…
thz for posting ..but i couldn’t find this kind of peas in Melbourne help me pls
i think you can try yellow peas too as they are very simiar and if you can’t find yellow peas too , then try chick peas which is not the same but tast similar too…hope it helps
Oh thanks so much. I never thought of this way and all the time my peas are over soft and didn’t come out nice shape. I will try soon. Thanks Wutyee.
Plz try Dare! 😛
ွှThanks you too.. 🙂
ma khaing says:
အမလဲ ဒီရောက်တော့မှ ပဲပြုတ်လုပ်စားဖြစ်တယ်။ နည်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမကတော့ ပေါင်းအိုးနဲ့ ပေါင်းတာပါ။ ပြုတ်တာနဲ့ ဘယ်လိုကွာလဲ နောက်တစ်ခေါက်ကြမှ
စမ်းကြည့်ရမယ်။ anyway thanksalot.
ပြုတ်တာနဲ့ ပေါင်းတာ ပုံစံတူတူလောက်ပါပဲ မခိုင်…
Gargen pea ကို ဂူဂယ်လ် ကြည့်တာ garden pea ပဲ ထွက်လာတယ်။ အမ နောက်တစ်ခါ ဈေးသွားဝယ်ရင် ကုလားဆိုင်မှာ အဲဒီပဲကို ဘယ်လိုရေးထားတယ်ဆိုတာ ကျေးဇုးပြုပြီး ဖတ်လာပေးပါနော် လမ်းကြုံတဲ့ အခါပေါ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
try yellow peas….they are similar…
မိုးရေ yellow pea လို့ ကုလားဆိုင်မှာ ရှာဝယ်ပါ။ ပဲက မြန်မာနိုင်ငံထဲကလို မျက်စိ မပါဘူး
၀တ်ရည်ပျောက်နေတာ ပဲပြုတ်လေးနဲ့ ပြန်ပေါ်လာတယ်
တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်း)
heee မအားတာနဲ့ ဟင်းသစ်တွေ မတင်ရတာ ကြာသွားတယ် မချော။ ခုမှ ပြန်ပေါ်လာတယ် ဟီးဟီး:D
ဟုတ်ကဲ့ မလုပ်စားကြည့်ပါနော်.. အလွမ်းပြေလေးပေါ့
မလွယ်ပါလား ပဲပြူတ်စားရဖို ၂ရက်လောက်စောင့်ရမှာနော်
ဒါပေမယ့် မစားရတာထက် ဆိုင်ရင် လွယ်ပါတယ်။ တချို့ဆို အညှောင့်အရှည်ကြီးထွက်အောင် ၄ရက်လောက်ထားပြီမှ လုပ်ကြတာ…
Angeline Jensen says:
My dear Wut Yee,
I like your web side and read all the time but unfortunately in April, I can not read Myanmar font on my computer any more. I try to download again from your web side Myanmar font but It said that Google Chrome can not download.
What can I do? I would like to read all your recipes, especially this Pae byoke.
Could you please give me some advice how to get back Myanmar font.
i think that google chrome can’t read myanmar font so you better to use firefox or Internet explorer…hope it helps
Ma Angeline, wutyee also use google chrome. Myanmar font can change @Network setting. Yes better to use Mozzila or Internet explorer for Myanmar font.. Hope to get soon.. 😀
Dear Wut Yee,
Thank so much for shearing your recipes…
Thanksalot Wut Yee,
Now I can use and read all your recipes. once again thanksalot My dear Wut Yee.
ညီမ ထန်းလျက်က အမတို့ဆီမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့မရပါ ၊ထန်းလျက်အစားဘာထဲ့လို့ ရမလဲဟင် ၊ သိချင်ပါသည်။
မြတ်ရေ ထန်းလျက်အစား သကြားထည့်လို့ ရပါတယ်…
use sugar for sweet and addalittle bit of dark soy sauce for colour.
Thanks for recipe Ma Ei Thet!! 🙂
Thank you very much to Wut Hmone too. AJ
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 🙂
Thanks wutyee.I brought Gargen Pea from Yangon.But I don’t know how to make it and first time was failed.I will try again.
ok try it plz!! 😀
Wutyee yay…ku mar see tae, thwethwe lae try kyi oo mae, ya tae so yin fb mar photo tin like mae naw….thank you so much Wutyee <3
plz try it Thwe Thwe!! I will wait on Facebook.. ok 😛
မ၀တ်ရည်ရှင့် … ပဲပြုတ်ကို chick peas နှင့်လုပ်လို့ရပါသလား သိပါရစေရှင် …
မ၀တ်ရည်ရှင့် … ပဲပြုတ်ကို chick peas နှင့်လုပ်လို့ရပါသလား ပြောပါရစေချင် …
နိုင်ငံခြားက အခေါ်အဝေါ်တွေတော့ ၀တ်၇ည် သိဘူး။ yellow peas နဲ့တော့ ရတယ်ပြောတယ်
chick pea က ကုလားပဲ သုပ် လုတ်စားတဲ့ ပဲ လေ
I use Blue Boiling peas ( Australia ), it comes out exactly , like ပဲပြုတ် we have in Myanmar.by the way , thank you for your fantastic cooking methods. It brings all the memories I have in child hood in Myanmar. THANK YOU 🙂
You r welcome 😀
ကျေးဇူးပါနော် မ၀တ်ရည်ရေ …
yellow peas ကိုပဲ ကုလားဆိုင်မှာ မေးဝယ်ပြီး လုပ်စားတော့မယ် …
Thanks also sis! 🙂
Lilian Lai says:
OMG! wanted to eat foralong time. I will definately try this week-end. Thanksalot!!!
Soda ဆိုတာ Baking Soda ကိုပြောတာလားမ၀တ်ရည်။ chick peas နဲ့ကောပဲပြုတ်လုပ်လို့ ရပါသလားသိပါရစေ။
hote ya mel hin tel.. baking soda par
Ma Wut Yee,
Soda ka baking soda lar ta char soda larr..
thine kyuu so much for recipe,
Arr pay tei,
ဒီနေ့ အချိန်ပေးပြီး ပြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်ကထဲက ပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့။
လောဘကြီးပြီး တစ်ကီလိုတိတိကို ရေစိမ်လိုက်တော့ တကယ့် ဧရာမကြီး ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါကြောင့် အိုးအကြီးကြီး လိုက်ရှာပြီး လေးနာရီလောက်ကြာကြာ ပြုတ်လိုက်ရတယ်။
ထန်းလျက်မရှိလို့ သကြားနှင့်ကြာညှို့နဲနဲ ထည့်လိုက်တယ်။
မြည်းကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်လေး ကောင်းသား။
Glad to hear bro 🙂 Thanks also Ko Ko Maung 🙂
လုပ်စားကြည့် ညီမ။ အိမ်လုပ်ပဲပြုတ်လေးက အရမ်းကောင်းတယ်… ကျေးဇူး 🙂
စားတော်ပဲရှာမရလို့Yellow Peas နဲ့ပြုတ်တာ ဘယ်လိုမှကို နူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်မလာပဲ မာဆတ်ဆတ်နဲ့မို့ လာလုပ်ရမလဲ။ ပဲတွေကို တညရေစိမ်ပြီးလို့ နောက်တညဇကာထဲမှာထားတာလဲ အညှောင့်ထွက်မလာလို့ဒုတိယတခေါက်ထပ်ပြီးအစမ်းပြုတ်ကြည့်တဲ့အခါ အညောင့်ထွက်အောင် ဇကာထဲ ၂ ရက်ထားလဲ အညှောင့်ကထွက်မလာနဲ့မို့ဦးနှောက်အင်မတန်စားရပါတယ်။ နည်းလည်းရှိရင် ပြောပါဦး။ အညှောင့်ထွက်တာမထွက်တာထက် ပြုတ်တဲ့ပဲ နှူးညံ့ရင်ပဲတော်ပါပြီ။ အိုးအဖုံးကိုပြုတ်နေစဉ်လုံးဝမဖွင့်ပါဘူး။
Yellow Pea နဲ့တော့ တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ နူအောင် pressure cooker နဲ့ ပြုတ်ကြည့်ပါ။ 🙂
ဘယ်လိုမှသဘောမထားပါနှင့် ကျနော်ကအရမ်းဝါသနာပါပြီး ပဲပြုတ်ကြိုတ်တဲ့သူမို့ ၀င်ပြောမိတာပါ ပဲ အညှောင့်ထွက်ချင်လျှင် ၄၈ နာရီ ထားရန်လိုပါတယ် မနက် တခါ ညတခါ ရေအေးလေးဖြန်းပေးပါ အ၀တ်သန့် ကိုရေစွတ်ပြီးအုပ်ထားပေးပါ အပေါ်ကနည်းအတိုင်း ပြုတ်ကြည့်ရင် ပဲပြုတ်က အရမ်းကိုနူးပြဲသွားတာကိုကြုံရပါလိမ့်မည် ပြုတ်တဲ့အခါ ရေကို ပဲမျက်နှာပြင်အထိမရောက်
စေပါနှင့် ပဲကိုရေစစိမ်တဲ့အချိန် မှာရော ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာပါ ဆိုဒါ တစ်ဇွန်းထည့်ရပါမယ်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလဲ မီးသိပ်မပြင်းစေပဲ မိနစ် ( ၃၀ ) လောက်မှာပဲနူးတာနဲ့ ဆန်ကာတခုထဲကိုသွန်ပြီးအအေးခံရပါမယ် ၊ အေးသွားတဲ့အခါ Ziplock / Freezer Bag ဖြင့်
ပဲရှာရခက်နေရင် ကုလားဆိုင်မှာ (YELLOW VATANA )နံမည်နဲ့ရှာပါ အဲဒါ YELLOW PEAS ပါ ။
ညီမလေးေ၇ ပဲပြုတ် ပြုတ်နည်းကို ခုမှဖတ်မိတယ်။ေ၇မစိမ်ဘဲပြုတ်မိတာ တနေကုန်လောက်ပြုတ်လိုက်၇တယ်။
ညီမလေးနည်းအတိုင်း ပြန်လုပ်ကြည့် ဦးမယ်၊ ကျေးဇူးနော်။
ပဲပြုတ်က ရေစိမ်မှ ပြုတ်ရတာ နူပြီ အဆင်ပြေတာ။ ပြန်လုပ်ကြည့်ပါနော်…
[…] အုန်းထမင်းနှင့် ကြက်သားဟင်း […]
I’m also in UK, Manchester
Where do you get Hta-Nyat Khal??? In indian shops?
I’ve never seen once before.
yellow peas ဆိုပြီ မေးဝယ်ရင် ရနိုင်မယ် ထင်တယ် sis…
Thanks you so much -:)
OM goodness! this is so helpful! thanksalot!
taing kyaw says:
I’m friends of U T.K n D M.K Soe.To be intrested in cooking at an old age is difficult.Your recipes r simple n clear n also understandable for me.Thanks for sharing with us.SADU,SADU,SADU
Mary Aung says:
စင်​ကာပူ မူစတာဖာ ကုလားဆိုင်​ က green bean ဝယ်​ပြီး စမ်းပြုပ်​ ကြည့်​တယ်​။
စ​တော်​​တော်​​ကောင်းတယ်​ဗျို့။ ဒါ​ပေမဲ့ ​မေ​မေက​တော့ မကြိုက်​ဘူး။ အခွန်​ထူလို့ တဲ.။
စစ်ရေ… ဆားဆိုဒါဆိုတာ baking soda နဲ့တူတူပဲလားဟင်!
Kyay zue amyar g tin par dl ma wut yee
Ama yae food house kyount kyount taw taw ko asin pyay pr dl ❤️❤️❤️❤️❤️